Ixesha kunye nabahlobo 57
Iyiphi indlela efanelekileyo yokudibanisa amazwe okuvuka nokuphupha ukuze kungabikho sikhephe ngexesha apho umntu olele engakwaziyo?
Umxholo wale mibuzo yinto ehlala ungaqwalaselwa. Abo baye bayiqwalasele ngokubanzi baye bacinga ukuba ayifanelekanga ngelixa. Kodwa umxholo ubalulekile. Nangona ithuba lokungazi nto phakathi kokuvuka nokuphupha lingenakupheliswa lo gama nje umntu engeyiyo into engaphaya komntu, inokushitshiswa kakhulu. Ekuvukeni kwendoda iyazazi izinto ngaye, kwaye ngendlela ethile izazi yena. Kwimeko yokuphupha yena wazi ngenye indlela.
Indoda yokwenene ngumgaqo oqinisekileyo, ukukhanya okuqonda ngaphakathi komzimba. Yena, njengalo mgaqo wazi, unxibelelwano kwimo yokuvuka umzimba we-pituitary, oyintsimbi etyibilikisiweyo esgebeni. Kwisimo somzimba esimanyumnyezi sinxibelelana naye ngolwazi malunga nokusebenza ngokungasebenziyo okwenziwa emzimbeni, njengokuphefumla, ukugaya, ukufihla, kunye neziphumo zokwenza oku njengezolisayo okanye zokuqaqambisa izinzwa. Iimvakalelo, ngeendlela zemithambo-luvo, yenza umgaqo-nkqubo wokuqonda wazi ngezinto ezisehlabathini. Indalo isebenza ngalo mgaqo wazi ngaphakathi nangaphandle nangaphandle. Ngexesha lokuvuka, ngaphakathi ngaphakathi ukuya kwimeko yomzimba wendoda; Ukusuka ngaphandle kokuya kwizinto ezibonakalayo kwihlabathi. Indalo isebenza kuye ngenkqubo enovelwano enovelwano, isikhululo esirekhodayo, esengqondo. Umntu ubambe umzimba wakhe ngenkqubo ye-nervous system, iziko elilawulayo nelililungu lomzimba. Ke lo mgaqo uyazi ukuba unxibelelana nendalo emzimbeni womzimba, kwaye ungena kwindalo kwaye ubambe umzimba emzimbeni ofanayo wepituitary.
Umzimba wokhuselo sisihlalo kunye neziko apho imigaqo-nkqubo eyamkelayo ifumana impembelelo kwindalo kwaye apho imigaqo-nkqubo elawulayo ilawula khona, isebenza okanye yenze ngokuchasene nendalo ngenkqubo ye-nervous system. Ukuqhakamshelana nokunxibelelana kwimeko yokuvuka emzimbeni we-pituitary mmele kuphazamisa kwaye kuthintele imisebenzi yokungasebenzi ngokuzimeleyo kunye nemvelo. Oko kukhanya kuvuthayo emzimbeni we-pituitary kubeka uxinzelelo kwimisebenzi yendalo yomzimba, kwaye kuthintele amandla obomi ekuvuseleleni izicubu namalungu omatshini kunye nomatshini womzimba, kwaye ke kugcina amandla. Ukukhanya kukukhanya kugcina wonke umzimba uxinzelelo, kwaye ukuba ukungqubana kwaqhubeka ixesha elide ngokwaneleyo ukufa kuyakulandela, njengoko kungekho bomi bomi bunokungena ngelixa umzimba uphantsi kwengcinezelo yezi zinto zibabayo. Ukugcina umzimba uqhubeka kuyimfuneko ukuba umzimba ube namaxesha xa ungaphazanyiswanga, kwaye xa unokuphumla kwaye uphinde kwakhona. Ngesi sizathu ithuba lexesha elibizwa ngokuba bubuthongo libonelelwa ngomzimba. Ukulala kunika imeko yomzimba apho amandla obomi anokungena, awulungise kwaye awondle. Ukulala kunokwenzeka xa ukukhanya komgaqo okwazi ukuyeka ukuvutha emzimbeni we-pituitary.
Umgaqo wokuqonda yinxalenye yengqondo; Eli candelo lengqondo linxibelelana nomzimba. Unxibelelwano lwenziwa ngenkqubo ye-nervous central kwaye ilawulwa ngumzimba we-pituitary. Ukuhamba ngumbandela obangelwa kunxibelelwano olukhoyo phakathi kwenkqubo ye-nervous central kunye nenkqubo yovelwano enovelwano ngokusebenzisa iziko eliqhelekileyo, umzimba we-pituitary. Ngalo lonke ixesha lo mgaqo-siseko uqaqambisa isibane somzimba wendoda ivukile-oko kukuthi, wazi umhlaba. Logama nje iimpembelelo zinikezelwa kumgaqo-nkqubo wokwazi ngenkqubo enovelwano enovelwano, umgaqo-nkqubo ogciniweyo ugcina ukukhanya kwawo kukhanya kumzimba we-pituitary kwaye ke ngoko ugobe wonke umzimba wenyama. Xa umzimba udinwe kakhulu kukudinwa kwaye uphelile amandla akhe awabinakho ukufumana imbonakalo kwindalo kwaye ke awunakuwudlulisela kumzimba okhuselweyo, nangona ingqondo izakuwamkela. Yimeko apho umzimba udiniweyo kodwa ingqondo ifuna ukuphaphama. Elinye inqanaba kukuba apho ingqondo ngokwayo ingayichaphazeli imbonakalo ingayifumana kwindalo kwaye yona ilungele ukurhoxa. Kuzo zombini iimeko ukulala kuya kuphumela.
Ukulala kusetha xa iswitshi esidibanisa iiseti ezimbini zeeseli emzimbeni we-pituitary siguqulwe ukuze uqhagamshelo lwaphuke.
Emva kokuba uqhagamshelo lwaphukile umthetho-siseko ukwimeko yokuphupha, okanye imeko engagcinwanga imemori. Amaphupha ayenzeka xa umgaqo-siseko uqaqamba, njengoko uhlala usenzeka, kwiiseli zeemvakalelo, ezinxulumene nengqondo. Ukuba umgaqo-siseko awazi kukhanya kwezi nerve akukho maphupha.
Ngexesha lokuvuka, umgaqo-siseko uyazi ukuba kukwexeshana, ukunxibelelana okufana nokukhanya komzimba. Olu nxibelelwano lunjenge-flash yinto umntu abiza ukuba azi ngayo, kodwa enyanisweni ayisiyokwazi. Nangona kunjalo, ukuya kuthi ga ngoku, kwaye ngenxa yokuba iyinto yonke anayo umntu ekule meko ikhoyo ngoku, makayeke, ngenxa yokwenziwa ngokutsha, ukubizwa ngokuba kukungazi. Leso sisiseko esime kwimeko yakhe yokuvuka. Ubengenakukwazi okanye azi nantoni na ukuba umhlaba ongaphandle ubengena kuye kwaye umvusele. Ngelixa evuselelwa yindalo uyayazi ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye iyonke iyonke imincili eyonwabisayo okanye enobuhlungu yile nto azibiza ngayo. Intsalela yetotali yeembonakalo zonke ezibonakaliswa yindalo azichaza ukuba unguye. Kodwa ayisiye ngokwakhe. Oku kupheleleyo kweembonakalo kumthintela angazi ukuba ungubani okanye ungubani. Njengoko engazi ukuba ungubani na, le nkcazo nje ayizukunika ulwazi oluninzi kumntu ophakathi, iya kuba yinto exabisekileyo ukuba intsingiselo yalo ifezekisiwe.
Kukho, njengoko umntu esiya kulala, ixesha elimnyama phakathi kokuziva kwimeko yokuvuka kunye nokuqonda kwimeko yokuphupha. Eli xesha lobumnyama, xa umntu engazi nto, libangelwa kukwaphula uqhagamshelo xa icinyiwe icinyiwe kwaye isibane somgaqo-nkqubo wokuqonda singasakwazi ukukhanya kwilungu lomzimba.
Indoda engazi kwanto ngaphandle kwemibonakalo efunyenwe ngeemvakalelo kwimo yokuvuka okanye kwimeko yephupha, ewe, ayizazi, njengoko ibizwa njalo, xa kungenakufunyanwa mbono, nokuba kukuvuka okanye ephupheni. Isibane esiqondayo kufuneka sizazi ngokwahlukileyo kwiimpawu zokuvuka okanye ukuphupha, ukuze indoda ikwazi. Ukuba ukukhanya azizazi kwaye zikwimeko eyahluke ngokupheleleyo kwinto eyaziwa ngokuba yimimandla yokuvuka nokuphupha, loo nto ayinakuba nexesha elingaziwayo phakathi kwala majini mabini. Nangona umntu engenakuhlala eyazi, angalinqumamisa ixesha lokungazi, ukuze kubonakale ngathi akukho xesha lekhefu.
Phambi kwempendulo yombuzo kungaqondwa ukuba ubukho bezi nyaniso kufuneka ziqondwe, nangona izibakala zingenakufunyanwa. Xa ezi nyaniso ziqondwa, umntu ofuna ukwazi ngexesha elimnyama phakathi kokuvuka kunye nemeko yokuphupha uya kuqonda ukuba loo meko ayazi kuphila nje ngexesha lokujonga, ngaphandle kokuba imeko yokwazi ikhona ngexesha lokuvuka. kwaye amaphupha athi; Ngamanye amagama, umntu kufuneka abengaphezulu kwendoda eyaziyo into azibiza ngayo, kodwa eneneni ekuphela kwentsalela yetotali yetotali yokuqonda ezenziwa zizimvo kukukhanya kwengqondo. Kuya kufuneka azi ukuba kukukhanya kwengqondo okuqinisekileyo, ngokwahlukileyo kwimbonakalo yezinto ukukhanya ezikhanyiselwe kuzo.